ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ထမ်း”
အေးဗျာ။ အဲဒီစကားကြီး ထည့်ထည့် မပြောရင် ကောင်းမယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်လိုက်တပ်နေတာ သိပ်ပြီး အထာမကျဘူး။
ကိုပေါရေ... ကျွန်တော်က မြန်မာ့ ဆိုင်းဝိုင်းကြီးထဲက ပတ်ဝိုင်းကို အရမ်း သဘောကျတာဗျ။ ဒါပေမယ့် Metallica သီချင်းပဲ တီးချင်နေတယ်။
စိတ်က အဓိကပဲလို့ထင်ပါတယ်…
စိတ်က မရိုးသားရင် အပြင်မှာ ရိုးရိုးသားသား ၀တ်ထားလဲ အလကားပါပဲ…
စိတ်က ရိုးသားရင် လူကလဲ ရိုးသားနေမှာပဲလို့ခံယူမိတယ်…
သူများအမြင်မှာ ယဉ်ကျေးစေချင်လို့ပြုမူပြောဆိုနေထိုင်တာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ယဉ်ကျေးရတာကို နှစ်သက်လို့ပြုမူပြောဆိုနေထိုင်တာ အတော်ကွာလိမ့်မယ်နော်…
ကျွန်မကတော့ အဲဒီပေတံတွေနဲ့တိုင်းမိတယ် ကိုပေါရေ…
I mdfan of the death metal bands like "Marilyn Manson", "Korn", etc ...
But "Myoe' Ma Nyane", is oso my Favorite.
I enjoy to see not only the "Hot Girls with Skirts" but oso the "Cool Grils with Lon Gyi"...
LOLZ .. anyway, i will be still loving to read any kinds of meaningful articles through internet..
i can't stop reading ur blog man!!
I have nothing more to say ,as you said it all. I absolutely agree with you and admire you for having the courage of touching the very sensative issue.....CULTURE.
Keep on going .....Ko Paw.
ကိုပေါရေ.. ကွက်တိပဲ ကွက်တိပဲ.. I can't agree with you anymore!
ဟိဟိ မိုက်တယ်ဗျာ မြှားတစ်စင်းနဲ့ ပစ်မှတ်တော်တော်များများထိအောင်ပစ်နိုင်တယ်
ကိုမကြိုက်တာ ကိုယ်လက်မခံနိုင်ကို ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ထိုးထည့်လိုက်တာတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲလုံးဝမကြိုက်ဘူး... အဲဒီအကြောင်းပြောမိတိုင်း အတိုက်အခံပြောရတာက များတယ်.. အင်း...ဒါပေမယ့် လူတွေကဘိလိယက်ခုံ ကိုကြိုက်နေကျတာကိုး................ဘောင်ကျော်ထိုးရင် မထိုးတတ်ဘဲလာတယ်လို့အပြောခံ ရမှာပေါ့............. ဩော်လောကလောက ဒီလိုပါပဲ
ဒီတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ကိုယ်လုပ်ကြပါ။ ...@ So What's Yr Problem...?
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး စကားကျယ်ကြီးကို တတ်နိုင်သရွေ့ မသုံးကြတော့ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ ...@ Are U Myanmar National..??
နားကလောလို့ပါ။...@ So What..?
တကယ်ပေါတဲ့ ကိုပေါပဲ ... တော်သေးတာပေါ့ ပိတောက်ရိပ်မှာပဲပေါဘလို့ ....
ZT… ကိုယ်မကြိုက်တိုင်း တခြားလူရဲ့ အကြိုက်တရားကို ပိတ်ပင်တာဟာ မကောင်းပါဘူး။
နေညိုရင့်…. ကျနော်လည်း ပတ်ဝိုင်းကို သဘောကျပါတယ်။ တချို့ဝင်းဦးသီချင်းတွေ၊ မာမာအေးသီချင်းတွေမှာ နောက်ကနေ ပတ်ဝိုင်းကြီးနဲ့ တီးထားတာမျိုးတွေကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
တန်ခူး… ယဉ်ကျေးတာနဲ့ ရိုးသားမှုက အ၀တ်အစားနဲ့တော့ မဆိုင်လှဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
၀င်းလတ်… ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တဲ့လူတွေများလာရင်တော့ အလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။
အမည်မသိ…. ထိုအတွေးမသေချာ… ရေးရေးတော့ ရှိပါသည်… မလှိုင်အပြည့်နို့ဆီ….မြို့မနဲ့တူပေသည်….လက်ညိုးလေးနဲ့ ထိုးတဲ့လို့…ပါးစပ်ထဲ နို့ဆီ…ချိုအီ ချိုအီ…. မြို့မလည်း ဂေါ်ဂေါ်ဂွီဂွီ…နားထဲချို…အီ…ချိုအီ…………တဲ့။ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ မြို့မသီချင်းလေးတပုဒ်ပါ။
ဒုတိယအမည်မသိ…. အင်း….ကြာရင်တော့…ပြေးပေါက်မှားကိန်းရှိတယ်။း-)
စီအမ်အေ….. ပြောချင်နေတာ ကြာပြီ။
ခင်ဦးမေ……. ဘာလဲ…ပြောချင်ရာပြောပါ... ဘာပြောပြော နားထဲမ၀င်ဘူး ဆိုတာမျိုးလား….း-)
အောင်ကိုကိုထိုက်….. စက္ကူပစ်မှတ်တွေကို ထပ်ထားမိလို့ နေပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
ကိုရွှေအောင်….. ဒီလိုပါပဲ ကိုရွှေအောင်…. ယဉ်ကျေးမှုကို ခုတုံးလုပ်၊ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်၊ နိုင်ငံရေးကို ခုတုံးလုပ်၊ လူမှုရေးကို ခုတုံးလုပ်……. ခုတုံးတွေ ခုခံပြီး စိတ်နေမြင့်သယောင် ဆောင်ကြရရှာတာပေါ့။
အမည်မသိ…. @@ Are you Myanmar Nation..??….. So What!
စိုင်းခမ်းထွန်း …. ကိုပေါပါ ဆိုနေမှ…။
ထောက်ခံပါတယ်။ ၁၂၀% ထောက်ခံပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှု မျက်နှာဖုံးတပ် ဖိနှိပ်မှုများ ကင်းလွတ်သော လူ့အသိုက်အ၀န်းဆီသို့ ............
Thanks god, all of you, Ko paw and fellows are not staying in my country right now.
You can say everything, its cool but don't come back to MM.